XOG: Wasiirrada Puntland oo Shir deg-deg ah ka yeelanaya natiijadii ka soo baxday Shirkii Muqdisho (Maxa cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Wasiirrada Puntland oo Shir deg-deg ah ka yeelanaya natiijadii ka soo...
Boosaaso (Halqaran.com) – Madaxweynaha maamulka Puntland, Mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan Magalada Boosaaso ee Gobolka Bari ayaa la filayaa in khamiista maanta ah in golihiisa Wasiiradda dhammaantood uu la qaato kulan xasaasi ah, sida ay xaqiijisay Madaxtooyadda Puntland.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in shirkaasi looga hadli doono qodobo ay ka mid yihiin, arrimaha Shirka Caalamka iyo Soomaaliya ee Arbacadii shalay lagu soo gabagabeeyay Caasimadda Muqdisho iyo khilaafka xoogeystay ee kala dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland, Deni ayaa horay u diiday ka qeyb galka Shirka, islamarkaana qaadacay, waxaana lagu waddaa in Puntland ay ku dhawaaqdo Maanta go’aamo cusub oo ka dhan ah DF Soomaaliya.
Mr. Deni ayaa horay u sheegay iney diyaar u yihiin wada hadal ay la galaan Dowladda Federaalka si loo xaliyo tabashada jira, islamarkaana hal wax loo jiheeyo.
Ugu dambeyn, Maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale qaadacday shirkii lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Natiijada Shirka Muqdisho
Shir deg deg